Kunomdonsiswano wendlu eHanniville | News24
Kunomdonsiswano wendlu eHanniville
ISITHOMBE:nompendulo ngubane UNksz Fikile Mthembu emi eduze kwendlu yakhe le athi uphucwa yona ngankani uNksz Benzani Khanyile esekomitini ewadini.
UKHALA ngokuphucwa indlu yakhe owesifazane othi lokhu kwenzeke ngoba engasayihambi imihlangano yekomidi lenhlangano ebusayo i-ANC ewadini ahlala kuyo.
UNksz Fikile Mthembu wase Haniville, eCopesville uthi uphucwe indlu yakhe nguNksz Benzani Khanyile naye ongomunye osekomitini le wadi, omphuce ngoba ethi uMthembu akasabonakali nangokhasha emihlanganweni yekomiti.
Ekhuluma ne-Echo uKhanyile uyaphika ukuthi uphuce uMthembu umuzi kodwa uthi indlu uyithathe ngoba vele uMthembu ubengasafuni ukuhlala kuyona.
Kanti uMthembu yena uthi usala engenandlu nje ngoba amalungu ekomiti ethi akasayihambi imihlangano yekomiti ngakho-ke kumele aphucwe indlu. Sengigqekezelwe endlini yami izikhathi eziningi abantu bengena bethatha impahla yami, kusho uMthembu.
“Ngize ngishiya indlu nje, lena esengiphucwe yona ingoba nganginenkinga yezigebengu ezazingena zintshontsha endlini yami. Sekuze kwenzeka izikhathi eziningi kanti futhi bese ngibona ukuthi impilo yami isengcupheni. Bengihlala nontwana wentombazane ogcine naye engasenzi ngendlela efanele esikoleni ephazanyiswa ukungena kwezigebengu endlini zisina zidedelana zintshontsha impahla yami.
“Bese kuwumkhuba ojwayelekile futhi sebekwenza ngisho ngikhona endlini. Kulapho-ke nami ngize ngakhetha ukuthi ngithathe ingane yami iyohlala emakhaya ngoba ngibona ukuthi umntwana useyahlukumezeka kanti nami ngibe sengiyishiya indawo ngayohlala kwenye,” kusho uMthembu. Uqhube wathi kwaba khona umfana oweza wazohlala endlini enzela ukuyigada njengoba yena engasahlali khona.
“Kulapho-ke kuqale khona ngitshelwa ukuthi umuntu osendlini ukhishwa ikomiti ngoba mina ngingasabonakali emihlanganweni yekomiti. Indawo nganginikwe ilona ikomiti mina ngase ngakha umuzi.
“Ngifike uKhanyile eselungise igceke futhi esefake eyakhe ingidi kakhiye emzini wami, umfana obehlala endlini engasekho. “Nami ngifike ngafaka eyami ingidi ngoba umuzi kungowami futhi ngingafuni nawo noma ukuhamba kuwona,” kuqhuba uMthembu.
Khonamanjalo uKhanyile uthe yena ukhulume kahle noMthembu mayelana nendlu futhi uyathuka uphatheka kabi ukuzwa ukuthi yena ukhipha uMthembu endlini.
“Sikhulume kahle naye (uMthembu) ngenkulumo sithumelelana naye kuWhatsApp. Ngimcelile ukuthi eze kumina sizobonisana angitshele ukuthi angangidayisela ngamalini uthayela wakhe nesicabha sendlu.
Akekho obemphuca indlu ngenkani njengoba sekuvela kanjalo manje.
Ikhansela lakaward 29 uThandi Ndlovu uvele waluvala ucingo lapho ethintwa i-Echo ngalolu daba